काठमाडौँ । उपत्यकाबाहिर कोरोना (कोभिड–१९) नमूना परीक्षण धमाधम भइरहेको छ । मङ्गलबार परीक्षणका लागि मेशिन पुगेपछि सातवटै प्रदेशमा नमूना परीक्षण धमाधम भइरहेको जनाइएको छ । धरानस्थित बीपी कोइराला विज्ञान प्रतिष्ठानमा सोमबारदेखि नै शुरु भएको हो । अहिले धरानमा दैनिक १२
१९ चैत्र २०७६, बुधबार १६:३२	१९ चैत्र २०७६, बुधबार १६:३२
खस्यौली । प्रदेश नम्बर ५ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले प्रदेशको राजधानी र नामकरणको विषय राजनीतिक विषय भएको बताएका छन् । बुटवलमा आज आयोजित साक्षात्कारमा उनले प्रदेशको राजधानी र नामकरण सकेसम्म सर्वसम्मत बनाउने प्रयास भएको जानकारी दिए । मन्त्री
२ पुष २०७६, बुधबार १७:०४	२ पुष २०७६, बुधबार १७:०४
प्रशासन सेवाका ९८ प्रतिशत उपसचिव संघमा नै समायोजन
काठमाडौं । प्रशासन सेवाका अधिकांश उपसचिवहरु संघमा समायोजन भएका छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्र द्धितिय श्रेणी, उपसचिवहरुको समायोजन गरिएको विवरणमा अधिकांश उपसचिवहरुले संघ रोजेका हुन् । ८ सय
२४ माघ २०७५, बिहीबार १८:१२	२४ माघ २०७५, बिहीबार १८:१२
कहिले तोकिन्छ ४ वटा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी ?
प्रदेश १, प्रदेश २, प्रदेश ३ र प्रदेश ५ ले आफ्नो नाम र राजधानी तोक्न बाँकी छ ।
१२ कार्तिक २०७५, सोमबार १५:३१	१२ कार्तिक २०७५, सोमबार १५:३१
प्रदेशको अस्थायी मुकाम र भवनको टुंगो लाग्यो, हेर्नुहोस् कुन प्रदेशको कहाँ ?
उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि लागू हुनेछ । प्राविधिकहरू खटाएर भौगोलिक संरचनाअनुसार ठाउँ छनोट गरिएको हो । प्रदेश १
२१ पुष २०७४, शुक्रबार ०९:५१	२१ पुष २०७४, शुक्रबार ०९:५१